Izinto okufanele uzenze eGalicia ehlobo | Izindaba Zokuhamba
IGalicia isibe ngokuhamba kwesikhathi njengenye yezindawo ezifunwa kakhulu kuyo yonke iSpain. Inezinto eziningi eziyidingayo, kusukela ekudleni kwayo komzimba kuya emaphathini ayo angapheli, izindawo zayo ezinhle kakhulu namabhishi ayo aseparadisi. Njengoba sithanda ukukhetha nokukhetha, sizokunikeza iqoqo le- izinto okufanele uzenze eGalicia ehlobo.
IGalicia ehlobo ine zonke izinhlobo zokuzijabulisa, futhi ngokungangabazeki izivakashi zijabulela umzuzu ngamunye wokuvakasha kwazo, kungakhathaliseki ukuthi zihlala kuphi. Kukhona okuthile kuwo wonke umuntu, ibhishi noma intaba, idolobha noma indawo yasemakhaya, enomndeni noma neqembu labangane lokuzijabulisa. Ngakho-ke kubo bonke lokhu kukhethwa kwezinto abangazenza eGalicia kuleli hlobo.
1 Iya emikhosini yedolobha
2 Iya ephathini yokudla
3 Vakashela iGalifornia eziqhingini zaseCíes
4 Vakashela iCathedral yaseSantiago
5 Yidla isitsha sokudla kwasolwandle
6 Bona ukuphela komhlaba
7 Zama i-queimada kanye nogologo wekhofi
8 Chitha izinsuku ezimbalwa emaphandleni aseGalicia
9 Ukugqoka ezigcawini
Iya emikhosini yedolobha
Uma kukhona okuthile okwenziwa ngesikhathi sasehlobo eGalicia kunjalo hamba uyephathini, kepha sikhuluma ngemikhosi ejwayelekile yasedolobheni. Edolobheni ngalinye elincane banamaphathi abo, futhi ngalinye likhethekile kubahlali balo, ngakho-ke sizohlala sithola isimo esihle nobumnandi obuningi. Ukuhlala le mikhosi ejwayelekile yedolobha kunoma iyiphi indawo yeGalicia kungumqondo omuhle weholide.
Iya ephathini yokudla
Njengoba nje kunemikhosi yasemakhaya, sithola i- amaqembu amahle okudla. I-gastronomy yeGalicia yamukelwa emhlabeni wonke, futhi ngenxa yalesi sizathu ifanele ukuvakashela omunye wale mikhosi. Imikhosi ephakamisa ukudla kwasolwandle, inyama noma imikhiqizo ekhetheke kakhulu, njengePadrón Peppers.
Vakashela iGalifornia eziqhingini zaseCíes
Isithombe seGalifornia sijwayelene nathi sonke, futhi ukuthi la mazwe ahlobene kakhulu neCalifornia. Amabhishi amahle, izindawo ezinhle zasehlobo nehlobo elihle lokuntweza phezu kwamanzi noma ukuya emabhishi aseparadisi afana nalawa URodas eziqhingini zaseCíes. Ngalokhu kufanele sithathe isikebhe ethekwini laseVigo, eBaiona noma eCangas futhi sijabulele uhambo olwandle size sifinyelele kulezi ziqhingi ezinhle. Siyakuqinisekisa umuzwa wokuzitholela endaweni ethile eCaribbean noma eCalifornia.
Vakashela iCathedral yaseSantiago
Awungeke uphuthelwe ukuvakashelwa enhlokodolobha ehlobo. ICathhedral yaseSantiago igcwele izivakashi, ikakhulukazi ngemikhosi ye ISantiago Apóstol ngoJulayi 25. Kuzoba nolayini kodwa futhi kube nomoya omuhle emigwaqweni yedolobha elidala, futhi uma sihlala singabona imililo esiteji sesonto elikhulu ngobusuku bomhla zingama-24.
Yidla isitsha sokudla kwasolwandle
Yize sikhuluma ngokuya emicimbini yokudla, olunye lwalezo zinsuku alunakuphuthelwa ukuya endaweni yokudlela enconywe othile ohlala endaweni, uku nambitha okukodwa kwalezozitsha zokudla kwasolwandle. Esinye isiphakamiso ukuthi kudliwe kuma-furanchos, izikhungo lapho abantu bedla kakhulu futhi baphuze iwayini elisele kusuka esivunweni sonyaka odlule. Ngaphambi kokuba bekungekho emthethweni, kepha namuhla kuvamise ukuba yizindawo zokudlela ezijwayelekile kepha lokho kuthintwa kwe-furancho, kunokudla okuningi nezintengo ezingabizi.
Bona ukuphela komhlaba
Ngalokhu asisho ukuthi umhlaba uyaphela, kepha ukuthi amaRoma akholelwa ukuthi umhlaba wawuphela eFinisterreYingakho lapho sifika kuzoba sengathi besisekupheleni komhlaba, noma okungenani lokho bekucatshangwa ngaphambili. Kuyindlela yokucabanga ukuthi amaRoma azizwa kanjani lapho efika kuleli zwe futhi ebona ulwandle olukhulu.
Zama i-queimada kanye nogologo wekhofi
I-Los imvelaphi yalesi siphuzo saseGalician Akucaci nge-queimada, kodwa ukuthi iyathandwa kakhulu nokuthi isebenza ukuxosha imimoya emibi esaziwa yibo bonke abantu. Ilungiselelwe ihambisana nesiphonso esithandwa kakhulu, futhi yakhiwe ikakhulu nge-brandy noshukela, kanye nesinye isithako esifana nobhontshisi wekhofi noma ikhasi likalamula kanye nezicucu ze-apula. Ungashiyi ngaphandle kokuzama. Ngokuqondene nogologo wekhofi, ngesinye isiphuzo esijwayelekile, futhi esinamandla, esenziwe nge-brandy futhi sithathwa ngendlela yesibhamu.
Chitha izinsuku ezimbalwa emaphandleni aseGalicia
IGalicia inezindawo eziningi ezinhle zasemakhaya lapho kungenzeka khona ukuhlala nokuphumula. Uma nje sicabanga ngogu lolwandle, sizolahlekelwa enye yezintelezi ezinkulu zalo mhlaba, okuyindawo yasemakhaya. Ukuthula, labo amahhotela asemakhaya Ngesitayela esijwayelekile ezindlini zamatshe, abantu abajabulisayo emadolobheni amancane nezindawo ezithakazelisayo ezikhona, zibalulekile.
Ngesikhathi sasehlobo, imibukiso yazo zonke izinhlobo iyanda kakhulu. Sinamaqembu amaningana abalulekile futhi esingavunula kuwo uma lokho kusihlekisa. I- I-Medieval Fair yeNoia, iFair ePontevedra, i-Arde Lucus eLugo noma iFeira de Istoria eRibadavia ngezinye zezibonelo, futhi ngokuqinisekile sizothola ezinye eziningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izinto okufanele uzenze eGalicia ehlobo